DEG DEG: Mukhtaar Roobow oo soo gaarey magaalada Muqdishu
MUQDISHU, Somalia - Diyaarad gaar ah, oo siday Afhayeenkii hore ee Kooxda Al shabaab, Mukhtaar Roobow Cali "Abu Mansuur", ayaa goordhaw kasoo dagtay Garoonka Diyaaradaha ee magaalada Muqdishu.
Mukhtaar Roobow oo ay wehliyaan Wasiirka Gaashaandhigga dowladda Federaalka Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed, iyo Saraakiil kale ayaa lagu soo dhaweeyay Garoonka Aadan Cadde, waxaana looo galbiyay dhanka qasriga Madaxtooyada Somalia.
Wararka ayaa sheegaya in Mukhtaar Roobow uu saacadaha soo socda Shir Jaraa'ida ku qaban doono Muqdishu, si uu u iclaamiyo inuu kasoo baxay fekerka Al shabaab, waxaana la filayaa inuu la kulmo Madaxda sare ee dalka, oo ay kamid yihiin Madaxweyne Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Kheyre.
Roobow ayaa saaka iska soo dhiibayy degmada Xudur, ee gobolka Bakool, kadib markii Saraakiil katirsan Koonfur Galbeed Somalia kasoo kaxeeyeen deegaankii uu mudo ku sugnaa ee Abal, halkaasi oo Al shabaab kusoo weerartay todobaadkii tagey.
Wasiirka difaaca Somalia ayaa Xudur kasoo wadey Roobow oo kasoo dejiyay magaalada Muqdishu.
Wixii kusoo kordha warkana, kala soco wararka dambe, ee Garowe Online
​Ciidanka DFS oo ku biiray Dagaalka Mukhtaar Roobow iyo Al shabaab
Soomaliya 12.08.2017. 11:08
XUDUR, Somalia - Ciidamada dowladda Federaalka Somalia ee ku sugan gobolka Bakool, ayaa ku biiray dagaalka u dhaxeeya Al shabaab iyo Malleeshiyada taabacsan Mukhtaar Roobow (Abuu Mansuur).
Taliyaha ciidamada xoogga ee gobolka Bakool Col Maxamed Xasan "Tima-Cad ...
Soomaliya 17.12.2017. 09:41
Fahfaahin: Wasiirka Gaashaandhiga DFS oo la kulmay Muktaar Roobow
Soomaliya 13.08.2017. 12:23
​Fahfaahin: Al-Shabaab oo la wareegtay Fariisinkii Muqtaar Robow
Soomaliya 09.08.2017. 19:48
Mukhtaar Robow oo Shir Jaraa'id ku qabtey Muqdishu [SAWIRRO]
Soomaliya 15.08.2017. 13:29
Al shabaab oo Weerar Culus ku qaadey Mukhtaar Roobow
Soomaliya 09.08.2017. 10:27
Mukhtaar Roobow oo ka dagay Xudur [qorshihiisa cusub]
Soomaliya 29.11.2017. 12:29
Al Shabaab oo sheegtay inay dishay Wiilka Mukhtaar Roobow
Soomaliya 15.12.2017. 22:40